Nagu Saabsan - Goodao Technology Co., Ltd.
Bixiyaha Batteriga & Bilaashka Bilowga
Beddelasho & Beddelaad
Xirmooyinka Xidhmada & Tareenka
Nalalka Degdegga ah
Lambarada loo yaqaan 'Forklift Lamp'
Waxaa la aasaasay 1995, HANGZHOU TONNY ELECTRIC & TOOLS CO., LTD.waa mid ka mid ah soosaarayaasha hormuudka ah iyo soo saareyaasha qalabka korantada baabuurta iyo qalabka Shiinaha. Warshadeena waxay ku taalaa Aaga Warshadaha Xianlin, Degmada Yuhang, Hangzhou 311122, Zhejiang oo leh dhul dhan 20,000 mitir murabac iyo 15,000 mitir oo laba jibbaaran.
Shirkadeena waxay ku takhasustay qaabeynta, soosaarida iyo qeybinta qalabka korantada gawaarida iyo aaladaha, sida batariyada gawaarida gawaarida, korantada, boodhadhka boodhka, nalalka shaqada, nalalka beero, taageerayaasha gawaarida, taageerayaasha DC ee la qaadan karo, matoorka hawada, nadiifiyaha gaariga, iwm. Waxaan sidoo kale samee adeegyada OEM iyo ODM. Awoodda waxsoosaarka weyn ee 14 xarumood oo isugu jira kuwa caadiga ah, daraasiin mashiinno duriin sare ah, iyo in kabadan 450 shaqaale ah ayaa ah awooddeena soosaarka aasaasiga ah. Koox xirfad u leh QC&QA ayaa dammaanad qaadi kara inay fuliyaan ISO9001: Nidaamka kontaroolka tayada. Dhanka kale, kooxda R&D ee in kabadan 20 injineer khibrad leh ayaa sameynaya alaabo cusub oo hal abuur leh isla markaana bixinaya taageero farsamo oo dhan kadib iibinta.
Isugeynta aagga warshadda
Tirada Injineerada: 20 qof
Naqshadeynta Software-ka: Solidworks, Pro / E, Rino, iwm.
U sii macmiilka OEM & ODM macaamiishooyinka sida muunadoodu tahay, sawiradooda ama fikradahooda; Sii macaamiisha soo jeedinta daruuriga ah si ay u ilaashadaan tayada una buuxiyaan shuruudaha suuqa.
Kooxda Naqshadeynta Elektaroonigga ah
Kooxda Naqshadeynta Dhismaha
Warshad duritaanka caagga ah
Awoodda duritaanka caaga ah: 100g ilaa 2500g;
Tirada mishiinka: 20+
Khadadka wax soo saarka
Awoodda waxsoosaarka weyn ee 14 xarumo gole oo caadi ah iyo in kabadan 450 shaqaale ayaa ah quwadeena aasaaska ah, Kooxda QC&QA ee xirfadleyda ah ayaa dammaanad qaadi karta inay qaadaan nidaamka ISO9001: 2015.
Waxaan leenahay aag 50,000 oo laba jibaaran fuudh labajibbaaran, la kulan macaamiisha dalabka kaydinta
Nidaam: Nidaamka ERP ayaa la dabaqay intii waxbarashadu socotay.
Waxaan leenahay koox khibrad leh oo macquul ah. Intooda badan waxay leeyihiin wax kabadan 15 sano oo khibrad ah
Waxaan ku shuban karnaa haamaha 3x40HQ isku waqti.
Weelka Loading Gates
Waxaan horumarinay badeecadaha hal-abuurka leh, iyo u adeegista macaamiisheenna dhammaan suuqyada adduunka. Macaamiisheenna qiimaha weyn ayaa ku raaxeysta caanka ah adduunka, sida Wal-Mart, Autozone, Scotts Company, Advance Auto Parts iyo Lidl iwm.
Cinwaanka:Wadada No.1 Jiaqi, Aaga Warshadaha Xianlin, Degmada Yuhang, Hangzhou, Shiinaha